अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या के हो? – Everest Dainik – News from Nepal
अविवाहित युवतीमा दूध चुहिने समस्या के हो?
प्रश्नः म २४ वर्षको छु। अविवाहित हुँ। तर, मेरो स्तनबाट दूध चुहिने समस्या देखिएको छ? निकै तनावमा छु। के हो स्तनबाट दूध चुहिने समस्या? के कारणले हुन्छ र उपचार के हो ? – एस
उत्तरः जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। तपाइँको जस्तै समस्या भएका धेरै युवतीको उपचार भइसकेको छ। त्यसकारण तनाव नलिनु होला। केही समयअघि राजधानीको एक कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत २१ वर्षीया युवतीले कक्षामा पढिरहेको समयमा अनौठो अनुभूति गरिन् । अचानक छाति चिसो भएर आयो । तत्काल त्यति वास्ता गरिनन् । तर छाति भिज्ने क्रम बढ्दै थियो । घरमा आएर हेर्दा स्तनबाट दूध चुहिएको थियो । सुरुमा अनौठो लागेपनि यसलाई उनले गम्भीर रुपमा लिइनन् । तर अविवाहित उनमा यो समस्या बारम्बार दोहोरिने गर्न थालेपछि उनी निकै तनावमा परिन् । र एक साथीको सुझावअनुसार चिकित्सककहाँ पुगिन् । खासमा उनमा यो समस्या प्रोल्याक्टिन हर्मोनका कारणले भएको रहेछ ।
स्तनपान गर्ने बच्चा नहुँदा वा अविवाहित महिलाको स्तनबाट दुध चुहिने समस्या भइरहेको हुन सक्छ । के कारणले दुध चुस्ने बच्चा नभएको समयमा पनि स्तनबाट दुध बगिरहन्छ रु यसबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ।
प्रोल्याक्टिनोमालाई सामान्यतः २ प्रकारमा छुट्याउन सकिन्छ स्
मुख्यकुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने हाइपरप्रोल्याक्टिमेनिया मष्तिस्कबाट आउने भएकाले आफ्नो बे्रेनलाई हरेक समस्याबाट मुक्त राख्नुपर्छ । छातीको समस्याले पनि यस्तो समस्या हुनसक्छ । कहिलेकाँही क्यान्सरको सम्भावना हुने भएकाले यस्तो समस्या देखिए तत्काल चिकित्सको परामर्श लिनुपर्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट साभार
ट्याग्स: अविवाहित युवती, गर्मी, दूध चुहिने